China Non-Rebreather အောက်ဆီဂျင်မျက်နှာဖုံးစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Bornsun
အောက်စီဂျင်ပမာဏများစွာလိုအပ်သောလူနာများအတွက်အမြင့်ဆုံးသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအောက်စီဂျင်ကိုထိရောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရန်လူနာများအတွက်ရေလှောင်ကန်အိတ်ပါသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအောက်စီဂျင်မျက်နှာဖုံးကိုအသုံးပြုသည်။ Non-Rebreather mask (NRB) သည်အောက်စီဂျင်ပမာဏများစွာလိုအပ်သောလူနာများအတွက်အသုံးပြုသည်။ စိတ်ဒဏ်ရာဒဏ်ရာများခံစားနေရသောလူနာများသို့မဟုတ်နှလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများကို NRB သို့ခေါ်ဆိုသည်။ ၎င်းကိုမျက်နှာဖုံး၏ဘေးထွက်ရှိအပေါက်ငယ်များမှတဆင့်ဖိအားပေးရသည်။ လူနာရှူနေစဉ်ဤတွင်းများကိုတံဆိပ်ခတ်ထားပြီးပြင်ပလေထဲသို့မဝင်စေရန်တားဆီးထားသည်။ လူနာသည်အောက်စီဂျင်စင်ကြယ်စွာရှူနေသည်။ အဆိုပါ NRB များအတွက်စီးဆင်းမှုနှုန်းကို 10 မှ 15 LPM ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းကိုအသက်ရှူနေသောအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုလူနာ၏အဆုတ်သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။ အောက်စီဂျင်မျက်နှာဖုံးသည် elastic သိုင်းကြိုးများနှင့်ညှိနိုင်သောနှာခေါင်းကလစ်များပါ ၀ င်ပြီးမျက်နှာအရွယ်အမျိုးမျိုး၌အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Tubing ပါ ၀ င်သည့်အောက်စီဂျင်မျက်နှာဖုံးသည် 200cm အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့သောပြွန်နှင့်အတူပါ ၀ င်ပြီးကြည်လင်။ ပျော့ပျောင်းသောဗီနိုင်းသည်လူနာများအတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးအမြင်အာရုံကိုအကဲဖြတ်စေသည်။ Tubing ပါသောအောက်စီဂျင်မျက်နှာဖုံးသည်အစိမ်းရောင် (သို့) ပွင့်လင်းမြင်သာသောအရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် PVC ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
လူနာ Adjustment များအတွက် 3.Elastic ဦး ခေါင်းသိုင်းကြိုး
ရွေးချယ်ရန်အတွက်အရောင်နှစ်မျိုး - အစိမ်းနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု -
6.DEHP အခမဲ့နှင့် ၁၀၀% ရာဘာစေးအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။
elastic သိုင်းကြိုးနှင့်အတူ 1.Mask
2 မီတာပြွန် 3.With
4. အရွယ်အစား: XS, S, M, L ကို, L3, XL
5.bag: 1000ml သို့မဟုတ် 600ml
6.Quality လက်မှတ်: CE, ISO 13485
Oxygen မျက်နှာဖုံးနှင့် Oxygen Tubing ဆောက်လုပ်ရေးတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအားလုံးသည်စူးရှသောအစွန်းနှင့်အရာ ၀ တ္ထုမပါဘဲအစေးကင်း၊ နူးညံ့ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်သာမန်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများအောက်တွင်ဖြတ်သန်းသွားသောအောက်ဆီဂျင် / ဆေးဝါးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ မျက်နှာဖုံးပစ္စည်းများ hypoallergenic ဖြစ်ကြပြီးစက်နှိုးခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာ Buring ခုခံတွန်းလှန်ရလိမ့်မည်။
နားရွက်အောက်နှင့်လည်ပင်းပတ်ပတ်လည်ရှိ elastic သိုင်းကြိုးဖြင့်လူနာ၏မျက်နှာပေါ်တွင်မျက်နှာဖုံးကိုထားပါ။
မျက်နှာဖုံးလုံလုံခြုံခြုံသည်အထိ ၄ င်းသိုင်းကြိုး၏အဆုံးများကိုဖြာပါ။
ရောင်းရန် - တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်း
အမျိုးအစား - ၁pc / PE အိတ်၊ ၁၀၀pcs / ctn ။
ကြာမြင့်ချိန်: <၂၅ ရက်
မူလနေရာ - Jiangsu တရုတ်
မြုံ: EO ဓာတ်ငွေ့
အရောင်: Transperant သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်
1.Size XS, မွေးကင်းစ (0-18 လ) ခန္ဓာဗေဒပုံသဏ္maskာန်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးသည်မိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအားမွေးကင်းစကလေးငယ်များအား Aerosol ဆေးများကိုစီမံပေးသည့်လုံခြုံသောတံဆိပ်ခတ်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်။
2.Size S, Pediatric Elongated (၁-၅ နှစ်) ခန္ဓာဗေဒပုံစံမျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးသည်ကလေးငယ်များအား aerosol ဆေးများကိုစီမံခန့်ခွဲသောမိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအားလုံခြုံသောတံဆိပ်ခတ်ပေးသည်။
၃။ အရွယ်အစား M၊ ကလေးအထူးကုအဆင့် (၆-၁၂ နှစ်) ကလေးကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှအနည်းငယ်ကြီးသောမျက်နှာဖုံးသည်လုံခြုံစွာတံဆိပ်ခတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဆိုးရွားလှသည့်ကလေးငယ်များအားအေရိုးဆစ်ဆေးဝါးများကိုစီမံရန်ကူညီပေးပါ။
၄။ အရွယ်အစား L၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစံ (၁၂ နှစ် +) လမ်းညွှန်ချက်များသည်လူနာများအား၎င်းတို့တတ်နိုင်သလောက်အာဟာရရှိသောထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့ကူးပြောင်းရန်အကြံပြုသည် - များသောအားဖြင့်အသက် ၁၂ နှစ်ဝန်းကျင်။
၅။ အရွယ်အစား XL အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (၁၂ နှစ် +) လမ်းညွှန်ချက်များသည်လူနာများကို ၁၂ နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ရောက်သောအခါပါးစပ်ဖြင့်ထုတ်ကုန်သို့ကူးပြောင်းရန်အကြံပြုသည်။ များသောအားဖြင့်အသက် ၁၂ နှစ်ခန့်။
ရှေ့သို့ နှာခေါင်းအောက်ဆီဂျင် Cannula- ပျော့ Tip